Toeram-pivarotana lehibe ao Phoenix - Phoenix, Arizona
Toeram-pivarotan-tseraseran'ny tanànan'i Phoenix
Ny kianja filalaovam-piadidian'i Phoenix tany Phoenix, Arizona dia ny tranona fanatanjahantena ny Oakland Athletics tamin'ny taona 2014. Nifindra tao amin'ny kianjan'i Hohokam tao Mesa ny ekipa, ary ny 2015 ASU Sun Devils Baseball dia nifindra tany Phoenix Municipal Stadium.
Ny kianjan'i Phoenix Municipal dia hita ao amin'ny 60th Street sy Van Buren, tsy lavitra ny Downtown Scottsdale, Downtown Phoenix, ary Downtown Tempe sy akaikin'ny Zoo Phoenix sy ny Botanical Garden .
Scottsdale dia atsinanana, ary ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Phoenix Sky Harbor dia telo kilaometatra atsimo. Ity misy sarintany ahitana lalana mankany amin'ny kianja, ao anatin'izany ny fampahalalam-baovao Valley Metro Rail.
Ampiasao ny tabilao mipetraka ao amin'ity kianja ity mba hamaritana ny toerana hipetrahanao ao amin'ny Phoenix Municipal Stadium ary vakio ireto torohevitra ireto alohan'ny hividiananao ny tapakila.
Hipetraka ny mpankafy ao amin'ny ekipa baseball ao amin'ny State University any Arizona ... na aiza na aiza! Ireo mpankafy ny ekipa mpitsidika dia hipetraka aloha ao ambadiky ny dugout (fitsidihana).
Raha te hahita ny sarin'ny sehatra lehibe kokoa, dia ampitomboy fotsiny ny haben'ny endritsoratra eo amin'ny efijery. Raha mampiasa PC ianao dia ny Ctrl + (ny baiko Ctrl sy ny marika plus) ny fanalahidy ho antsika. Amin'ny MAC, dia ny baiko +.
Mankalaza ny andro iraisam-pirenena 2017 miaraka amin'ny fidirana maimaim-poana
Ahoana no hialana amin'ny hazo krismasy any Phoenix?
Fiarandalamby avy amin'ny Casa Grande
Phoenix sy Scottsdale Gay-Friendly Hotels and Resorts Guide
Toeram-pisakafoanana tsara indrindra any Phoenix amin'ny lohataona sy ny lohataona
Fête des Neiges Sary
Fivarotana sivy any Irlandy Avaratra: Ny faritanin'i Ulster
Inona no tokony ho fantatrao momba ny Siesta espaniola
Fetiben'ny mozika any Michigan Womyn
Horonan-tsary an-dalam-be tany Brooklyn
Dallas / Ft. Worth Area Attractions
Former Bunny Pam Ellis teo amin'ny Lake Geneva, Ankehitriny ary avy eo
Ny Tobin'ny Summer Adult Coolest ao Etazonia
American Turquoise - Oroka tsara tarehy ho an'ny androany ary famatsiam-bola ho an'ny ampitso
Zava-borona tsara indrindra any San Diego
Tari-dàlana manan-danja ho an'ny Festival Teaj 2018 any India
6 Fanomezana Scandinavian Great & Souvenirs
Vancouver Parades: Parade isan-taona any Vancouver, BC